KATHMANDUTemperature 14°CAir Quality132
हरेक वर्ष १० करोडभन्दा बढी रकमको व्यवस्था गरिन्छ, ती सञ्चार माध्यममा नेपालको विज्ञापन प्रसारण गर्ने भनेर । तर बोर्डले कहिल्यै काम गरेन र बजेट छुट्याउन पनि छाडेन ।
१ जनवरीको त्यो साँझ । दशरथ रंगशालाबाट संसारलाई आमन्त्रित गर्दै थियो, ‘सांग्रिला नेपाल’ । रंगशालाको प्याराफिटको उपस्थितिले नै भ्रमण वर्षको भद्रगोल चेहरा उदांगिइसकेको थियो । अन्तरकुन्तरका कुराले त झनै जिब्रो टोक्ने बनाइदियो । आमन्त्रित विदेशी राजदूतहरुको बस्ने मेसो पत्तै थिएन । बेलायती राजदूत सिट खोज्दै हैरान थिइन् । कतिपय संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई निम्तै पुगेन । २१ हजारभन्दा बढ्तालाई निम्तो गर्ने कुरा भए पनि कार्ड नै ४ दिनअघि तयार भए । यतिले भ्रमण वर्षको भद्रगोल देखाउन काफी थियो ।
जसै औपचारिक कार्यक्रम सुरु भयो, अर्को भद्रगोल देखियो । अघिल्लो साँझसम्म तयार कार्यतालिका नै गायब भइदियो । अघिल्लो साँझ भ्रमण वर्ष संयोजक सुरज वैद्यले सचिवालयका सदस्यलाई कार्यतालिकाबारे सामान्य ब्रिफिङ गरेका थिए । ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्रीको सन्देश प्रसारण गर्ने, संयोजक वैद्यले सम्बोधन गर्ने । अनि, अघिल्ला भ्रमण वर्षका संयोजक कर्ण शाक्य र योगेन्द्र शाक्यको भूमिका पनि थियो । राजेश हमालको सम्बोधनको कार्यतालिकै थिएन । तर भोलिपल्ट ती सबै एकाएक गायब बनाइयो ।
यी सबै घटना पर्यटन सचिवको एक एसएमएसको कमाल हो भन्ने चर्चा छ । त्यो सब हेर्दा वैद्य निरीहझैँ लाग्थे । अनि, मन्त्रालय र भ्रमण वर्षको रिसराग पनि देखिन्थ्यो । त्यसैले पनि हुनुपर्छ, कार्यक्रम सुरु भइसक्दा पनि मञ्चमा थिएनन्, वैद्य । तल र्‍यालीमा झुलिरहेका थिए । भ्रमण वर्षका निम्तालुको स्वागतमा पनि वैद्य देखिएनन् । औपचारिक पोसाकमा समेत नआएका वैद्यको भूमिका र शैली हेर्दा लाग्थ्यो, बिचरा संयोजक !
प्रसंग भमण वर्षकै । उद्घाटनभन्दा अघिल्लो एक बैठकमा संयोजक सुरज वैद्यले पर्यटन हिरो घोषणा गर्ने योजना मात्र सुनाएनन्, नाम नै प्रस्ताव गरे । संयोजक वैद्यको प्रस्ताव १ जनवरीको उद्घाटनमा पर्यटन हिरो घोषणा गर्ने थियो । धेरै नाममध्ये एउटा पूर्वपर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी पनि थिए । त्यही बैठकमा पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीले कुन कार्यविधिका आधारमा पर्यटन हिरो घोषणा गर्ने भनेर वैद्यलाई सोधे । वैद्यको जवाफ थियो– सचिवज्यू, तपाईं–हामीलाई थाहा छँदै छ नि ।
हावादारी शैलीमा पर्यटन हिरो घोषणा गर्ने प्रस्ताव फेल भयो । त्यसले पनि मन्त्रालय र भ्रमण वर्ष सचिवालयबीच दूरी बढायो । त्यसमा अर्काे काण्ड थपियो । मन्त्रीले पटक–पटक निम्तो कार्ड छिटो चाहियो भनिरहेका थिए । हुन्छ–हुन्छ भन्दै वैद्यले टारिरहेका थिए । सचिवालय पनि उद्घाटन कार्यक्रमबारे कसलाई के जिम्मा दिइएको छ भन्नेमा प्रस्ट थिएन । एक्लै डिल गरिरहेका थिए, वैद्य ।
त्यही मेसोमा अन्तिम साता आएर वैद्यले मन्त्रालयसँग ४ करोड मागे । १ करोडमा उद्घाटन कार्यक्रम सक्ने तयारी थियो । त्यसैअनुसार मन्त्रालयले वैद्यलाई खर्च अनुमति दिएको थियो । तर कार्यक्रम सुरु गर्ने दुई–तीन दिनअघि मात्रै वैद्य एकाएक ४ करोड नभई कार्यक्रम गर्न नसक्ने भन्न थाले । जबकि त्यसको हिसाबकिताब पनि प्रस्ट पारेका थिएनन् । त्यसले पनि वैद्यसँग वैमनस्य थपेको थियो– मन्त्रालयमा ।
त्यतिबेला चर्चा पनि भइरहेको थियो, १ जनवरीपछि पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई वैद्यलाई हटाउँदै छन् । त्यही हल्लाको बीचमा १ करोडको कार्यक्रम ४ करोडमा पुग्यो । प्रधानमन्त्रीको हटलाइनमा भएका वैद्यलाई हटाउन भट्टराईलाई गाह्रै थियो । अहिले मन्त्री भट्टराई र वैद्यको बोलचाल पनि राम्रो छैन । वैद्यलाई निरीह बनाएर हटाउने योजनामै उद्घाटनमा उनको कार्यतालिका एकाएक गायब पारिएको पो हो कि ?
दशकमा नबनेको विज्ञापन
एक दशकसम्म नेपाल प्रवर्द्धन गर्ने एउटा विज्ञापन तयार हुँदैन भन्दा नेपाल पर्यटन बोर्डलाई लाज लाग्नुपर्ने हो । तर लाज पचाएपछि कसको के लाग्छ ? बोर्डले विदेशी सञ्चार माध्यममार्फत नेपालको प्रवर्द्धन गर्ने योजना बनाएको एक दशकमा दुइटा भ्रमण वर्ष भइसके । सन् २०२१ को पर्यटन वर्षको बीबीसी, सीएनएन, रोयटर्स, सीजीटीएनमा सांग्रिला नेपालको प्रवर्द्धन गर्ने योजना बनेको थियो । त्यतिबेला निमित्त सीईओ सुवास निरौला त्यही रकमका कारण पनि विवादित बने । हरेक वर्ष १० करोडभन्दा बढी रकमको व्यवस्था गरिन्छ, ती सञ्चार माध्यममा नेपालको विज्ञापन प्रसारण गर्ने भनेर । तर बोर्डले कहिल्यै काम गरेन र बजेट छुट्याउन पनि छाडेन । एउटा विज्ञापनमार्फत नेपालको प्रवर्द्धन गर्न दशकसम्म नसक्नेले नेपाल भ्रमण वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन कसरी गर्लान् र खै ?
मन्त्री रिसाए भन्ने भयले मिडिया र पत्रकारलाई दोष दिनुअघि ऐनामा आफ्नै अनुहार हेर्ने कि ?...